Tsy hita intsony ny maha cité universitaire azy. Ireo tompon'andraikitra mitazam-potsiny, ny tanin'ny Université aza moa dia lasa toerana fanorenana privé, misy ny mpampianatra no maka azy, misy ny olo-tsotra.
Adino izany fahiny mbola nisy ala teny Ankatso, ka na ny hiditra eny aza dia misy gardien manenjika.
Ny lehiben'ny fampianarana, dia efa nihanona fotsiny amin'ny resaka pédagogie sy ny fampianarana fotsiny ihany, ry zareo mpampianatra rahateo sady manana ny université n'izy ireo, no mampianatra any amin'ny privé, ka na tsy mandeha aza ny fampianarana toa zaran'ny sasany aza mba ananany fotoana mampianatra toeran-kafa, ry zareo rahateo manenjika mampianatra ihany koa any amin'ny Faritany, eny hatrany ampitan-dranomasina ny sasany.
Ny resaka LMD aza nanatsotra ny fiainan'izy ireo.
Ny eny Vontovorona polytechnique, dia efa feno gaboraraka ihany koa raha ny trano honenana, tapitra simba tsy misy fanamboarana. Mi grevy lava fa tapaka ny jiro, nefa mpianatra injeniera, tsy mahatakatra manamboatra herinaratra ho azy, na biogaz ho azy.
Lazaina hatrany moa fa tsy misy ny vola. Marina izany, fa ny fako sy ny fanimbana ny toeram-pianarana, ny fambolena voninkazo anatsara ny tontolo iainana tsy misy ezaka akory na ny kely aza, dia ny tany mena famantarana ny polytech hatrany no hita eny amin'ny kiraro, ry be tanimenan'ny Vontovorona indray ireo mena kiraro ireo vao miarakaraka ny samy mpianatra.
Tsy lava ny teniko, nahoana ny Univeristé rehetra any amin'ny Faritany no nahavita nanamboatra ny toeram-pianarana, ny toeram-ponenana ary nandroaka ireo tsy mpianatra intsony, ka nahoana ny Université an'Antananarivo no mijery fotsiny. Roahay ireo tsy mpianatra intsony mipetraka eny Ankatso 1, Ankatso 2, Ambohipo, 67Ha sy ireo toerana an'i Université.
Fehezo ny mpampianatra, fa tsy hita akory izay fikarohana ataony eo, manjary rebirebena amin'ny anarana hoe mpampianatra mpikaroka, sy mpikaroka mpampianatra. Inona no karohina eo.
Omeko tsiny ny manampahaizana, indrindra fa isika zoky nivoaka fianarana, isika mpampianatra ny anjery manontolo. Aiza isika no mangina amin'izao fiainam-pirenena izao? Aiza ireo zavatra ampianarintsika ny mpianatra, tsy voatery ho grevy izany na fanoherana fanjakana, fa nahoana ny SECES no resaka fitakiana karama ihany no ahenoana feo, fa aiza ny soso-kevitra anatsarana ny toe-karena, ny sosialy, ny fandriampahalemana, ny famokarana, ny fitsaboana?
Ny pejy facebook aza no ahitana olona maro mizara fahaizana fitsaboana miainga amin'ny fitsaboana avy amin'ny zava-maniry, fa isika nianatra, mba aiza?
Ka ho marina ve ny teny hoe: "Ny Malagasy tia mampiana-janaka, nefa tia mpitondra tsy nianatra".